Hoggana Olaanaa WBO keessaa tokko kan ta’an Jaal Dhugaasaa Bakakkoo kaleessa BBC Afaan Oromoof yaada laatanii turan.
Dhimmoota Biraanuu Juulaa dubbate irratti, akkasuma wantoota garaagaraa gaafachuu yaalaniiru warri BBC Afaan Oromoo.
Haasaa sana dhaggeeffadheen jira. Jaal Dhugaasaa Bakakkoo akka waan “ani miseensa Shanee Gimii gumii Sabaa ABO ti!” Jedheetti dabarsuu yaalan. Dubbiin sun akka mummurame namaa gala. Haaluma gaaffichaaf deebii sanaa irra dhaabbadhee haasaan isaanii murmuramee waan walitti dhufe natti fakkaata. Daba akkanaa warri miidiyaa sana keessaa dalagutu raawwata.
Dhimma hogganoota ABO qabsoo karaa nagaatti amananii fi WBO’n hariiroo qabuu? Jedhamuu irrattis jaal Dhugaasaan haqa jiru himanii jiru. Hogganni ABO fi WBO’n erga quunnamtiin isaa adda citee tasumaa hariiroo akka hinqabne, wal quunnamee akka hinbeekne dubbataniiru.
Gaaffiin na ajaa’ibe “qabsoon yoom dhuma?” Jedhee gaafata Gaazixeessichi. Nan kolfe gaafficha yoon dhaga’e. Gaazixeessaa qabsoon yoom akka dhumu hinbeekne jira jedheen bira tare.
Walumaa gala hogganni ABO finfinnee jiruuf WBO’n tasuma hariiroof walitti dhuufenya akka hinqabne gaaffiif deebii sana irratti ajajaa olaanaa WBO keessaa tokko kan ta’an Jaal Dhugaasaa Bakakkoo ibsaniiru
Previous articleEthiopia pulls out of US meeting on Nile dam
Next articleAlgeria, Ethiopia Experience Worst Internet Shutdowns in Africa
Abbaa-Muudaa Madda-Walaabuu February 26, 2020 At 2:20 pm
Obbo Dhugaasaa Bakkakoo, hoogganaa muummicha W.B.O. ganna dheeraa tiin, baga nuuf jiraattan
jedhaanii mee maaloo. Horaa, bulaa, hoffolaa.